Vest Denim kokwenza ikhabethe fashionista ahlukahlukene kakhulu futhi ungavala cishe njalo ngubo etholakala into stylish. Vest Denim kubukeka kahle nge kokubili ehlotshisiwe ruches blouses, futhi ihembe abelungu sika, kanye ezinemibala isikibha. Namhlanje ezidumile ikakhulukazi egqoke uwumnikazi wenkampani waba nomzimba nqunu, ngaphezu jeans noma ibhulukwe.
Akubalulekile ukuba bakholelwe ukuthi jini ivesti - izingubo kuphela amadoda. Le ngxenye ingubo sekuyisikhathi eside babesuke ikhabethe wesilisa kumuntu wesifazane. Ngisho kwezamabhizinisi isitayela ivesti ngeke kuphela kubhekwane nesimo, kodwa uyokunika umnini wayo i lula kokuvamile.
Ngokuphathelene elilungile obuphelele sangaphansi, kwalandela kunzima ukukhomba namuhla. Mayelana efanayo ethandwa futhi eside (kufika ku mayelana maphakathi no-ethangeni lesokudla) futhi esifushane kakhulu jini uwumnikazi wenkampani. Ukuqedela bensimbi ephelele, izinkinobho, ngisho drawstring ezansi. Vest Denim namuhla akuyona nje ingxenye imvunulo, kodwa futhi ukwazi ukunquma isitayela ingubo bebonke.
Kusukela sizogqokani jini zitshalwa kule sizini? Lesikahle kungaba ibhulukwe umphetho wengubo, kanye sweaters zakudala futhi blouses. Kufanele kuqashelwe ukuthi imfashini yisici ezithakazelisayo - kwesinye isikhathi othanda ukubuyela. Kunjalo-ke nangobufakazi vest. Kuyobukeka abhanqiwe enkulu nge evamile eziqongweni mhlophe futhi chiffon iziketi. Vest-denim kungenye "sawubona kusukela esikhathini esidlule" olungenza ukusaphazela yangempela umphakathi!
Indlela thunga vest jini? Uma isandla jini futhi umshini wokuthunga kule akukho nzima - kwi-inthanethi ungathola eziningi emaphethini imihlobiso ukusebenzisa emcabangweni wakhe siqu. Ngaphezu kwalokho waistcoat zingenziwa kusukela jini jacket ubudala - kukhona intando umcabango uzosebenza.
Ake abahlala izesekeli nezinye izingxenye suit, okuzokwenza ugcizelele intombazane isitayela.
Umniningwane obalulekile - jini uwumnikazi wenkampani kukhona amantombazane omkhulu futhi abesifazane nge usayizi encane libanjwe. Ikakhulukazi uma ulalela eliphakeme imfashini kwesizini - ogqoke uwumnikazi wenkampani ngqo isikhumba.
Vest Denim kungenziwa kuhlangene turtleneck. Into kuphela okufanele kukhulunywe ngazo Kulokhu, ukhetha kahle imibala. Ngasinye ingxenye ingubo kumele ifane umbala isitayela ekhethwe intombazane futhi wakhe. Uwumnikazi wenkampani kahle izikibha, temabhodlela, amahembe, noma, futhi, uzokhetha imibala.
Uma ivesti esigqokwa phezu ihembe, ngaphezu, ungakwazi ukugqoka nge isiketi ipensela. Shirt kulokhu esakhiwe ku umphetho. Futhi omkhulu kule inhlanganisela bheka ibhulukwe zakudala, iziketi, Tulip, jeans ngqo noma jeans lwavutha.
Enye inhlanganisela waistcoat nebhulukwe, ubhanana, kodwa nakhu kubalulekile ukucabangela izici izibalo: ngoba intombazanyana egcwele, lokhu akuyona inketho.
Kuvele okufana ekahle ubhekwa inhlanganisela uwumnikazi wenkampani futhi Bermuda izikhindi noma izikhindi iDemo.
Njengoba isibonelo lezingubo ehlanganisa jini waistcoat, sikunikeza okulandelayo. Imfashini jini ivesti kuhlangene jeans phezulu nomhlophe. Zonke ndawonye kubonakala imfashini iyezwakala. Ukuchazwa lena ikhono uvuselele isithombe umbala omhlophe.
Uma ukhetha okungcono umuntu izicathulo izicathulo ne izithende, ngaphandle kwalapho cut ezemidlalo ivesti - kule samuntu athandeka nezicathulo endaweni ongaphakeme umthwalo futhi ballet emafulethini.
I izesekeli efanelekayo kakhulu ibhantshi, abe imigexo omkhulu - imigexo, nezigqizo, namacici, namasongo.
Musa ukuphika ngokwakho injabulo ukubheka imfashini, stylish, amahle inimitable! Vest Denim kuleli cala - omunye wabasizi engcono!
Boho izitayela - izici kanye nemithetho ukudala isithombe
Yini ukuba adle ngesikhathi sokukhulelwa: imithetho eziyishumi umsoco ofanele.